ငွေဘုရားသို့ အလည်ရောက်ခဲ့သည် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Local Guides » ငွေဘုရားသို့ အလည်ရောက်ခဲ့သည်
Posted by aye.kk on Mar 30, 2012 in Local Guides, Photography, Travel | 32 comments
ထိုင်းမြန်မာ နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ် ၊ မယ်ဆိုင်မြို့ မှ တစ်ဆင့် ငွေဘုရားသို့ အလည်ရာက်ခဲ့စဉ် အမှတ်တရ ရိုက်ခဲ့သော ပုံလေးများဖြစ်ပါသည်။
အမှတ်တရ လက်ဆော့ ခဲ့သောပုံလေး များသာဖြစ်ပါသည်။။
ဘယ်လိုများလုပ်သဒုံး သူကြီးပစ္စည်းတွေဖုံးကုန်ပြီ လှပါ၏ ရောက်ဖူးချင်ပါ၏
မရောက်ဖြစ်လိုက်တာ နောင်တ အကြီးကြီးရမိပါ၏ သိရက်နဲ့လိုက်မပို့ပေးသော
အားပေးသွားပါ၏ infinity ၏၏၏၏၏၏၏
ထိုင်းတို့ရဲ့အာချီ မိတ်ကပ်အဲလေ … ယောင်ကုန်ပြီ အာခီတက်ချာများမှာ အနုပညာလက်ရာမြောက်ပါ၏
လောလောဆယ်တော့ ပိုက်ပိုက်ကို ရိုက်ရိုက်ပြီးရှာနေပါ၏ သူများတွေနိုင်ဂျံဂါးကိုရောက်တော့
ကိုယ့်မှာအားငယ်လှတယ်……. စည်းစိမ်ကရှားလေတော့ ရွှေမောင့်မှာသည်းပူဆွေး ဒါ့ပုံသာကြည့်ရသေးတယ် ကုသိုလ်ကြောင့်လေး…….
လှ လိုက်တာဗျာ … လွမ်းမော သွားတယ်။ ခုံ လေးတွေ တန်းစီ နေတဲ့ ပုံလေး ကြိုက်တယ် ဗျာ။…ဒါနဲ့ အဲ့ ငွေတွေက အညှိ မတက်ဘူးလား ဗျ …
ကျေးဇူးဘဲ aye kk ရေ
ဝေါင်း လို့ တောင် အော်မိတယ်။
အဆောက်အဦးတွေက လက်ရာမြောက်ပြီး လှလိုက်တာ။
မရောက်ဘူးတဲ့ နေရာလေးတွေ ခေါ်ခေါ်သွားလို့ ကျေးဇူးပါ အစ်မအေးရေ။
အစ်မ လဲ အခုတစ်လော ခရီးသွား ဓာတ်ပုံဆရာ ဘဝ ကို ပိုကြိုက်နေပြီထင်ရဲ့။
ဒီတော့ ကျွန်မတို့ နေရာသစ် လေတွေ တွေ့ရတာပေါ့။ ကောင်းတယ်။
သစ်ပင်မှာ ချိတ်ထားတဲ့ မျက်နှာတွေ အကြောင်းသိလား အစ်မအေး။
ဗမာတွေငွေဘုရားလို့ ခေါ်တဲ့ဘုရားဖြူကိုရောက်တဲ့အချိန်ကပိတ်သွားပြီမို့ ..
အပြင်ကနေပြီးရိုက်ခဲ့ရလို့ လူတွေမတွေ့ ရတာပါ။။
ဟ.. ပုံတွေအားလုံးမိုက်တယ်… တကယ့် ရှုခင်း က လှနေပြီး မရိုက်တတ်ပြန်ရင်လည်း ကြည့်မကောင်းဖြစ်တတ်တယ်.. ဒါပေမယ့် ဒီပုံတွေ အားလုံးဟာ ရှုဒေါင့် ရွေးချယ်မှုရော အားလုံးကောင်းတယ်.. Photoshop ပါးပါးလေးသုံးထားပုံရတယ်
silver pagoda ဆိုတာ စာအုပ်ထဲမှာပဲ သင်ဖူးတာလေ ခုမှ မြင်ဖူးတာပါ
တစ်ကယ့်ကို ရှုမောဖွယ် ပါပဲ..
ပုံ ၁၀ က free toilet , Right?
အေးကေကေ ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်… ဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ. ဘုရားဖူးလိုက်ရတာ.. အရမ်းသာယာပြီး အရမ်းလှတယ်နော်…
သူတို့ရဲ့ အနုလက်ရာက မြန်မာတွေထက် အများကြီးသာတယ်။
သစ်ကိုင်းမှာ ခေါင်းပြတ်ကြီးတွေ ချိတ်ထားတာ ကြောက်တယ်။
ဓာတ်ပုံကို စာလေးနဲ့ တွဲတင်ရင် ပိုမိုက်မယ်။
မ aye.kk ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အပေါ်မှာ မမ မန့်ထားတာလဲဟုတ်တယ်။
ထိုင်းက အနုလက်ရာတွေက မြန်မာကထက် သပ်ရပ်တယ်။ အနုစိတ်တယ်။
ကျုပ်ထင်တာတော့ လက်ရှိမြန်မာ့အနုလက်ရာ တွေကလဲ
ဘာပဲပြောပြောငွေဘုရားကို မမ ကျေးဇူးနဲ့တော့ ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗျို့
အန်တီရေ … မြင်ဖူးသမျှ ၊ ရောက်ဖူးသမျှ ဘုရားတွေထဲ အတွန့်အတက် ကနုတ်တွေ အများဆုံးပါပဲ … ။
မြင်ဖူးခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါနော် … ဒါနဲ့ .. ခေါင်းပြတ်တန်းလန်းကြီးတွေက ဘာများပါလိမ့်.. ကြည့်ရင်း ကြက်သီးထမိတယ် … ။
ငွေရဲ့သဘောကလေ … ဒီတိုင်းထားရင်းတောင် လေသလပ်ပြီး မဲတတ်သေးတာ … ၊ နောက်ပြီး တခြား လူတွေ လက်နဲ့ ကိုင်တာများလျှင်လည်းမည်းတတ်ပါလျှက် … အခုဘုရားကငွေတွေက ပြောင်လက်နေတာပဲနော် … ။ ဘယ်လို ငွေကြေးချွတ်ဆေးမျိုး သုံးထားပါလိမ့် … ။
တော်တော် သပ်ယပ်ပြီး လှပတယ်လို့ ခံစားမိတယ်။
အတော့်ကို လှပပြီး ကြည့်လို့အရမ်းကောင်းတယ်နော်။ နောက်ခံနေလုံးနဲ့ ငွေဘုရားဆိုတဲ့အတိုင်း အရမ်းကို တောက်ပြောင်ပြီး ချက်ချင်းရောက်သွားသလိုခံစားရတယ်။ ဓာတ်ပုံရိုက်တာလည်း တော်လို့ဖြစ်မယ်နော်။ ကျေးဇူးပါ ခုလိုမြင်ဖူးအောင် ပြတာကော နောက်ဒီဘုရားရဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေဘာတွေကော ရှိဘူးလား။
အပင်မှာ တွဲလွဲချိတ်ထားတဲ့ ခေါင်းတွေက ဘာဓိပ္ပါယ်နဲ့ လဲ မသိဘူးနော်
ကောင်းလိုက်တဲ့ ရိုက်ချက်တွေ ၊ လက်ဆော့ ခဲ့ပေလို့ပဲ။ အတည်သာ ရိုက်လာခဲ့ရင် ငွေဘုရားဂေါပကက ပြန်ဝယ်ပြီး ပြက္ခဒိန် ထုတ်လိမ့်မယ်
မရောက်ဖူးတဲ့ နေရာလေး ဝင်ရောက်ဖူးမျှော် သွားပါကြောင်း
အမအေးရဲ့ ပုံတွေကြည့်ပြီး ..
အနော်လည်း သွားချင်စိတ် ဖြစ်မိတယ် …
အရမ်း သပ်ရပ် လှပတဲ့ နေရာနေပါလို့ …..
ပုံတွေအတွက် ရှဲရှဲပါနော် …
အန်တီအေး တကယ်လာမှာနော်။ ပုန်းမနေရဘူး ။ သွားချင်စိတ်တောင် ပေါက်လာပြီ ။ အခါပြီး လိုက်သွားလိုက်ရ ကောင်းမလားပဲ ။
လာခဲ့ပါ၊ပုန်းလို့ မရဘူး၊အန်တီက၀နေလို့ လေ။(စတာနော်)
သူတို့ကို(ယပက်လက်တွေကို)ရော အေးကေကိုရော အားကျမိပါတယ်။
တီပဒု ယပက်လက်တွေက ဘူဒွေတုန်း…..
တားမတိဘူး….. ယားဒယိုးတွေကိုလား အားကျပါနဲ့….. မြန်မာပြည်က ပုဂံကိုတော့
သူဒို့ဒွေမမှီဘာဘူး မြန်မာ့ပုထိုးများရဲ့အဆင့်ဆင့်သော ကွန်စထရက်ရှင်တွေဟာ
ဂုခေတ် တာဝါတွေမပေါ်ခင်ကတည်းက လောင်းလောင်းအဂိုး အပ်ပတူဒုတ်တွေဘာ
ဒေါ်တာတီတီကြာကြာရဲ့ ဒီလက်ရာမျိုး ကို ရှမ်းပြည်သားတို့ဓနုမြေပင်းတယရဲ့ ခြောက်မိုင်လောက်
တွားရင် ကွန်လုံဆရာတော်ဘုရားကြီးစံကျောင်းတော်မှာ တံပဝသည် ဦး…..ဘာဖြစ်တယ်ဆိုလား
စပေရှယ်လက်ရာများဖြင့်ပုံဖော်ထားပါတယ်ပ ဒါပေမယ့်ဂုခေတ်က ယားဒယိုးကျောင်းတွေများ
တယ်သားနားသလားမမေးပါနဲ့တော့ …. ရှမ်းပြည်ကကျောင်းအလှူရှင်အများစုတောင်
တူဒို့ဒွေလို လိုက်ဆောက်လုပ်ပြီးလှူဂုန်ဂျဘီ…. ဒါပေမယ့်အန်ဒီ ကေကေ ရဲ့ငွေကျောင်းလက်ရာ
ကတော့ လက်ဖျားခါလောက်အောင် ပုံသွင်းတော်ဒယ်နော်…. ဒါဒေါ့ဝန်ဂံပါတယ်ဗျ…..
ရှမ်းပြည်က လက်ရာတွေ မြင်ရဖို့ကတော့ ရှမ်းမင်းသားလေးမှာ တာဝန်ရှိတယ်။
ဓါတ်ပုံလေးတွေကြည့်ပြီး လှလိုက်တာ လို့ပြောမိအောင်ကို လှနေတာ…
သွားချင်တဲ့ နေရာတစ်ခုတိုးပြီး စာရင်းမှတ်လိုက်ပြီ…
ကိုယ့်နိုင်ငံကနေရာတွေမှာလဲ အဲ့လို လှပသပ်ရပ်စေချင်မိတယ်…
လှလိုက်တာ .. သွားလည်ချင်စိတ်ပေါက်လာတယ် …
ရန်ကုန်ကနေ ဘယ်လိုသွားရင် အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲလို့ ပြောပြပေးပါလား …
မယ်ဆိုင်-ချင်းရိုင်နေရာအနှံ့ လည်ပတ်လို့ ရပါပြီ၊ငွေဘုရားကချင်းရိုင်ခရိုင်ထဲမှာရှိတာပါ။